The Levante na Poniente ikuku | Network Meteorology
Ifufe Levante na Poniente bụ ifufe ndị dị mkpa n'oge ọnwa ọkọchị ma ọ dabere na ha na okpomoku a na-ata ahụhụ ma dịkwa mfe karị ma dịkwa mfe. Ma ị maara kpọmkwem ihe bụ isi njirimara ya na mpaghara ndị Spain ka a na-ahụkarị ha?
Mgbe ahụ, m na-eme ka o doo gị anya Aga m agwa gị okwu gbasara ikuku abụọ a.
1 Levante ikuku
2 Ifufe ọdịda anyanwụ
Typedị ifufe a si n’ọwụwa anyanwụ na-adịkarị nwayọọ, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ha nwere ike iru oke ikuku siri ike ruo otu narị kilomita n’awa ọ bụla. Levante na-ewekarị site na 4 ruo ụbọchị 7 ma na-ebutekarị ịrị elu na okpomọkụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke peninshula, na-eme na n'ọnọdụ ụfọdụ dịka na Seville ma ọ bụ Córdoba ọ na-eru ogo 40. N'ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ụdị ikuku a na-ewekarị iwe dị ka ọ na - eme ka ájá dị mma bilie ma na-echegbu ndị na-asa ahụ n'onwe ha.
Ifufe ọdịda anyanwụ
N'ihe banyere ifufe Poniente, ọ na-abịa site n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke oké osimiri. Ọ bụ ifufe dị mfe nke anaghị agafekarị kilomita iri ise n’otu awa. Oge nke ụdị ifufe a na-agbanwekarị ma na-enye aka ime ka gburugburu ebe obibi nwee ume ọhụrụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke peninshula ahụ.. Agbanyeghị, ọ na - ebute mmetụta na - abụghị akụkụ na mpaghara Mediterenian niile ebe ọ bụ na ha na - ata ahụhụ site na oke okpomọkụ na ikpo oku na - agakarị ogo 40. Ọdịda anyanwụ na-enyere mmiri oké osimiri jupụta na ayodiin n’ụba nke zuru oke iji mee ka tanning nke akpụkpọ ahụ dị ngwa.
Dị ka ị hụworo, ndị a bụ ụdị ikuku abụọ dị iche iche na-arụ ọrụ pụrụ iche n'oge ọnwa ọkọchị na nke ahụ Ha ga eme okpomoku na mpaghara ufodu nke peninshula nke di n’ebe ugwu kariri nke ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ifufe Levante na Poniente
Kedu ihe bụ ice ice?